नि: शुल्क Xbox प्रत्यक्ष कोड (२०२० प्रमाणित) - जेनेरेटर र सर्वेक्षण छैन - गेमि।
आजकल, गेमि forको माग बढेको साथ, मानिसहरू शारीरिक डिस्कहरूको सट्टा डिजिटली रूपमा उपलब्ध खेलहरूतिर बढिरहेका छन्। डिजिटल खेलहरू किन्नुको उत्तम फाइदाहरूमध्ये एउटा यो हो कि डाटा खानीहरूले कोडहरू क्र्याक गर्न सक्षम हुन्छन् जुन खेललाई स्टोरमा नि: शुल्क अनलक गर्दछ।
धेरै वेबसाइटहरूले दावी गर्दछन् कि ती Xbox को लागी नि: शुल्क प्रत्यक्ष कोड उत्पादन गर्न सक्षम छन्। त्यसो भए यस पोष्टमा हामी यी दावीहरू जाँदैछौं र फ्रि एक्सबक्स लाइभ कोड जनरेटरको बारेमा सत्य पत्ता लगाइरहेका छौं।
के नि: शुल्क Xbox प्रत्यक्ष कोड जेनरेटर वास्तवमै काम गर्दछ?
धेरै व्यक्तिहरू Xbox कोड जेनरेटर प्रयोग गर्ने बारे सचेत छन् तर चिन्ता नलिनुहोस्। यस सेक्सनमा, हामी Xbox प्रत्यक्ष कोड जेनरेटरहरूको लागि र यसको बिरूद्ध सबै पक्षहरूको छलफल गर्ने छौं।
नि: शुल्क PSN कोड कसरी पाउने?
नि: शुल्क PUBG UC पाउनुहोस् - कार्य विधिहरू
कोड या त ती व्यक्तिद्वारा प्रदान गरिन्छ जुन यसलाई दूर दिन इच्छुक छन् वा कोड जेनरेटरको प्रयोग गरेर यसलाई उत्पन्न गर्न। सफ्टवेयरले कोड उत्पादन गर्न क्रमबद्धता र संयोजनहरू प्रयोग गर्दछ जुन वास्तविक देखिन्छ, तर हुन सक्छ वा काम गर्दैन। यो भाग्यशाली ड्र खेल्ने जस्तो हो जहाँ तपाइँले पुरस्कार जित्न सक्नुहुन्छ वा गर्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ धेरै डाउनसाइडहरू छन् जुन तपाईले कोड जेनेरेटर प्रयोग गर्नु अघि विचार गर्न सक्नुहुनेछ।
समय खपत:कोड खनिकहरूले यी कोडहरूको लागि सेट समय वास्तविक देखिएला तर नक्कली बाहिर निस्कन सक्दछ। तपाइँले सबै कोडहरू प्रविष्ट गर्ने प्रयासमा लिनुपर्नेछ जुन साइटले जेनेरेट गर्दछ त्यसले ती मध्ये एकले तपाइँको लागि काम नगरे सम्म।
प्रतिबन्धित भइरहेको:तपाईंको खाता यी प्रकारका गतिविधिहरू प्रदर्शन गर्नका लागि निलम्बन हुन सक्छ किनकि यो कोड क्र्याक गर्न वा 'नि: शुल्क' खेलहरू प्राप्त गर्न अवैध छ। यहाँ Xbox Live को एक स्क्रीनशट छ जुन हाम्रो दावी समर्थन गर्दछ।
समयको बर्बाद:त्यहाँ जेनेरेट गरिएको कोडको कुनै ग्यारेन्टी छैन किनकि गुगलमा केवल एक खोजीको साथ तपाईले हजारौं साइटहरू फेला पार्नुहुनेछ जसले तपाईलाई नि: शुल्क कोडहरू दिन्छु भनेर दावी गर्दछ तर तपाई उनीहरूलाई प्रविष्टि गर्नुहुनेछ र आफैलाई कतै भेट्टाउनुहुनेछैन तर तपाईले आफ्नो समय बर्बाद गरिरहनु भएको थियो जुन तपाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। एउटा खेलमा त्यो स्तर पूरा गर्नुहोस्।
गोपनीयता खतरा:धेरै वेबसाइटहरूले तपाइँलाई तपाइँको इ-मेल ठेगाना प्रयोग गरेर साइन अप गर्न सोध्छन् र तपाइँको निजी जानकारी छ, साईन ईन नगरिकन वा यस्तै साइटहरूका लागि डमी इ-मेल ठेगाना प्रयोग नगर्न राम्रो हुन्छ। तपाईं पनि राम्रो विस्तार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यी प्रकारका बेईमान अनुरोधहरूलाई फिल्टर गर्न।
यस पोष्टको पछिल्लो भागमा, हामी ती तरिकाहरूमार्फत जान्छौं जुन तपाईं कानुनी र अधिक भरपर्दो कोडहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
नि: शुल्क Xbox प्रत्यक्ष कोड - कानूनी तरीका
आउनुहोस् त्यस पोइन्टमा पुग्न को लागी तपाईं स्वतन्त्र कोडहरू कसरी पाउने भनेर पर्खिरहनुभएको छ?
तपाईं YouTubers द्वारा गरेको सस्तामा भाग लिन सक्नुहुन्छ, जस्तै ThatDudeSly, रेक एलिस, र अधिक धेरै। यहाँसम्म कि यो भाग्यशाली ड्र को एक प्रकार हो, तर तपाईंसँग यहाँ बसिरहेको भन्दा एक बेग्लै अवसर छ र एक अवैध वेबसाइटबाट नि: शुल्क कोडहरू कोशिस गरेर।
२. स्टोरमा बिक्री
आजकल धेरै खेलहरू महिनौंको मामलामा निःशुल्क हुन्छन्, जस्तै फोर्टनाइट, एपेक्स महापुरूष, कल अफ ड्यूटी वारजोन, इत्यादि। पैसा खर्च गर्ने खेलहरू पनि विकासकर्ताहरूले छोटो अवधिको लागि नि: शुल्क गरेका छन्। त्यसोभए, बिक्री सुरु हुँदा तपाईं अवलोकनकर्ता हुनुपर्छ।
त्यहाँ धेरै सबरडिडेटहरू छन् जुन सस्तो कोडका लागि नि: शुल्क दिन्छ। तपाईं तिनीहरूमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ र तपाईंको इच्छामा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। रेडडिटको खोजी बक्समा 'r / freexboxcodes' र तपाईंले परिणामहरू लिनु पर्छ, जहाँ मध्यस्थकर्ताहरूले तपाईंलाई मद्दत गर्दछन्।
X. XBOX खेल पास
त्यहाँ अन्तिम कारण यो विकल्प उल्लेख गरेको कारण छ। यो प्राविधिक रूपमा नि: शुल्क छैन, तर यो पक्कै पनि विचार गर्न विकल्प हो, माइक्रोसफ्टले कम्पनीको रूपमा तपाईंलाई तीन सदस्यता मोडेलहरू प्रदान गर्दछ जहाँ तपाईं खेल पास वा अन्तिममा पास पास गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको आवश्यकताको आधारमा तपाईंले कुनै एउटा छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
खेल पास परम $ १..99 99 / महिनामा शुरू हुन्छ र खेल पास $ 99 .99 / / महिनामा तपाइँ नि: शुल्क सयौं खेलहरू पाउनुहुनेछ; त्यसकारण तपाईं असंख्य खेलहरूको सट्टामा आफ्नो पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
तिनीहरूले तपाइँको क्लाउड गेमिंग प्लेटफर्ममा तपाइँलाई नि: शुल्क बेटा पहुँच पनि दिनेछन्। तपाईं AAA शीर्षकहरूमा विशेष छुट पनि पाउनुहुनेछ। पूर्वनिर्धारित रूपमा, तपाईं टोम क्लेन्सीको इन्द्रेणी इन्द्रेणी छ सिज, रातो मृत मुक्ति 2, डूम ईटरनल, फोर्जा मोटर्सपोर्ट like जस्ता खेलहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
Xbox प्रत्यक्ष स्टोरमा कोड प्रविष्ट गर्न चरणहरू:
परम्परागत डिजिटल कोड जस्तै, तपाईं यो Xbox प्रत्यक्ष स्टोरमा कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्; यद्यपि रिफ्रेसरहरूका लागि चरणहरू निम्नानुसार छन्:
माईक्रोसफ्ट खाताको साथ लग इन गर्नुहोस्।
आधिकारिक माईक्रोसफ्ट स्टोरमा जानुहोस्।
त्यसोभए कोड प्रयोग गर्ने विकल्प छान्नुहोस्।
आवश्यक स्थानमा २--वर्ण कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्।
नोट: जे होस्, यदि तपाई कोड जनरेटर प्रयोग गर्न छनौट गर्नुहुन्छ भने पहिलो चरण कोड जनरेटर वेबसाइटमा कोडहरू उत्पन्न गर्नु हो।
निष्कर्षमा, कोड जेनरेटरको काम गर्ने सम्भावना एकदम कम छ। तसर्थ तपाईले स्वतन्त्र खेलहरूको ग्यारेन्टी गर्ने तरिकाहरू छनौट गर्नुपर्दछ, कि या त गिवावेमा भाग लिन वा Xbox खेल पास खरीद गरेर हुन सक्छ, जुन हाम्रो विचारमा, र तपाइँको लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो।
हामी आशा गर्दछौं कि यस पोष्टले तपाईंको प्रश्नको उत्तर दिईयो, र हामी आशा गर्दछौं कि तपाईले पनि समाधान पाउनुभयो। यदि तपाईंसँग कुनै सुझाव वा विधिहरू छन् जुन तपाईं नि: शुल्क Xbox प्रत्यक्ष कोड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, भने यसलाई तल टिप्पणी बाकसमा साझा गर्नुहोस्।
नि: शुल्क उपहार कार्ड अनलाइन पाउनुहोस्
म कसरी अनलाइनमा फिल्महरू हेर्न सक्दछु
प्लूटो टिभी अनुप्रयोग कसरी प्रयोग गर्ने
अमेजन उपहार कार्डहरू खरीद गर्न उत्तम तरिका